आज घट्यो सुनको मूल्य ! तोलाको कति छ त ?
आज (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ९० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य ९० हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै, तेजावी सुन तोलामा ८९ हजार ७६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा ९४० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।